English E-books | အဖြူရောင် ကောင်းကင်
“Microsoft Office Visio 2007 Step by Step”
စာမျက်နှာ : 336 Pages
အမျိုးအစား : PDF
အရွယ်အစား : 34.2 MB
ဒါကတော့ office 2007 ကို အသုံးပြုနည်း စာအုပ်လေးပါ . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလို့ ရပါတယ် .
စာအုပ်အမည် : PHP for Dreamweaver 8
စာရွက်ရေ : 530 pages
အရွယ်အစား : 11.9Mb
ဒါကတော့ Dreamweaver အကြောင်း လေ့လာချင် သူများ အတွက်ပါ. မြန်မာလို ကတော့ နောက်ပိုင်းကျမှ ကျွန်တော် ၀င်ရေးပေးပါ့မယ် .
ဒါကတော့ photoshop cs4 အကြောင်း အသုံးပြုပုံ အသုံးပြုနည်းကို ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ပါ . အတော်လေး ကောင်းပါတယ် .
Name : How to Do Everything Adobe Photoshop CS4
eBook Publish Date: April 21, 2009
ကဲ photoshop သမားများအတွက် tutorial magazine စာအုပ်လေးပါ . စာအုပ်လေးက အတော်လေး ကောင်းတဲ့အတွက် Link တော်တော်များများ ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Desinger လုပ်မည့်သူများ ဖတ်ထားသင့် ပါတယ် . အထဲမှာ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေလဲ ပါပါတယ် . ကျွန်တော့်မှာ တင်ပေးစရာ photoshop tutorial စာအုပ်တွေ ရှိသေးပါတယ် . လေ့လာလို့ ရအောင် တစ်အုပ်ချင်းစီ တင်ပေးပါ့မယ် . ကဲလိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် .
Download ifile.it | Download mediafire | Download turbobit | Download hotfile | Download Freakshare | Download rapidhsare | Download depositfiles | Download letitbit | Download sms4 | Download vipfile
« Ulead MediaStudio Pro 8
Myanmar Books »